China azụ kọfị kọmpụta na ndị na-emepụta | Yasin
Nkebi QUOTA Ule nyocha
Edo ntụ ntụ ma ọ bụ Granules, Soft, noaking
Detuo ma Smnụ
Ọ dịghị isi
10% ngwọta mmiri, 25 ℃
Ikwado njupụta (g / ml)
(ihe ntụgharị 5.79)
≤ 0.5mg / n'arọ
≤ 0.1mg / n'arọ
≤ 1.0mg / n'arọ
Mkpokọta Nje bacteria
Chart Na-asọpụta Maka Mmepụta Azụ Azụ
Azụ collagen nwere ike ịmịnye ahụ mmadụ, soro na mmemme dị iche iche na-arụ ọrụ, ma rụọ ọrụ na igbu oge ịka nká, imeziwanye anụ ahụ, ichebe ọkpụkpụ na nkwonkwo, na ịkwalite ọgụ.
Site na nchekwa ya dị elu na akụrụngwa, ịdị ọcha dị elu nke ọdịnaya protein na ezigbo uto, a na-ejikarị collagen azụ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ, dịka mgbakwunye nri, ngwaahịa nlekọta ahụike, ihe ịchọ mma, nri anụ ụlọ, ọgwụ, wdg.
1, Food Mgbakwunye
Azụ Collagen Peptide na-erigbu site na usoro nke ọzọ enzymatic hydrolysis breeki nke molekul na-eweta na nkezi molekụla arọ na-erughị 3000Da ma ya mere na-enyere mfe absorption site na ahụ mmadụ. A na - egosiputa nri kwa ụbọchị nke na - abụ nnukwu onyinye na akpụkpọ mmadụ site na ime ka usoro ịka nka belata.
2, Health Care ngwaahịa
Collagen dị mkpa maka ahụ mmadụ, gụnyere ọkpụkpụ, akwara, anụ ahụ, akwara, wdg Fish collagen dị mfe iji banye na obere akwara dị arọ. Ya mere enwere ike iji ya rụọ ọrụ nlekọta ahụike iji wulite ahụ mmadụ.
3） Ngosiputa Ngwa
Usoro nke ịka nká nke anụ ahụ bụ usoro nke ịhapụ collagen. A na-ejikarị collagen azụ na ihe ịchọ mma iji belata usoro ịka nká.
Collagen ida bụ isi ihe kpatara ọrịa na-egbu egbu. Dị ka isi collagen, a pụkwara iji collagen azụ na ụlọ ọrụ ọgwụ.
Export ọkọlọtọ, 20kgs / akpa ma ọ bụ 15kgs / akpa, poli akpa n'ime na kraft akpa elu.
Na pallet: 8MT na pallet maka 20FCL; 16MT na pallet maka 40FCL
N'oge njem, anaghị anabata nnabata na nnabata; ọ bụghị otu ihe ahụ dị ka kemịkal dị ka mmanụ na ụfọdụ nsi na ihe na-esi isi.
Na-na a tightly emechi ma dị ọcha akpa.
Echekwara na ebe dị jụụ, akọrọ, ebe a na-ekpo ọkụ.
Azụ kacha mma
Azụ Scale Collagen
Hydrolyzed Azụ Collagen